नयाँ प्रोटोकल प्रेत चट्याङ्ग नेटवर्क संग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ - Blockchain समाचार
फेब्रुअरी 3, 2018 व्यवस्थापक
नयाँ प्रोटोकल प्रेत चट्याङ्ग नेटवर्क संग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ
यस प्रोटोकल भूत र GHOST जोनाथन Sompolinski र तेल अबिब Zohar को निर्माताहरू एक नयाँ प्रोटोकल वर्णन कागजात यो हप्ता प्रकाशित. यस प्रेत प्रोटोकल लेनदेनको विश्वसनीय पुष्टि प्रतिज्ञा “कुनै पनि नेटवर्क ब्यान्डविथ मा”, स्मार्ट अनुबंध सहित. नयाँ विकास नै आदेश देखि अघिल्लो समाधान मा आधारित छ, भूत, जो Bitcoin को परम्परागत ब्लक संरचना बाट प्रस्थान र थप मापनयोग्य प्रयोग “निर्देशित acyclic ब्लक रेखांकन” (blockDAG). शोधकर्ताओं प्रविधि रूपमा वर्णन “को Satoshi श्रृंखला को सामान्यकरण, जो छिटो वा ठूलो ब्लक को एक प्रणाली लागि अझ उपयुक्त छ।”
जस्तै चट्याङ्ग नेटवर्क अफलाइन समाधान विपरीत, जब लेनदेन एड-मा नेटवर्कमा सञ्चालन गर्दै, प्रेत ग्राहकको आधारित समाधान कि तपाईं blockroom सबै लेनदेन डाटा छोड्न अनुमति दिन्छ प्रदान गर्दछ.
लेखक अनुसार, प्रेत को मुख्य विशिष्ठ सुविधा यो ब्लक को सम्भव रैखिक अर्डर बनाउँछ छ, जो भूत अनुमति थिएन. यसका लागि, उहाँले उपयोग गर्छ “लोभी अल्गोरिदम” को blockDAG मंच मा र ब्लक उत्पन्न distinguishes “इमानदार” बाट नोड्स “गैर-मिलेर” को खानी प्रोटोकल देखि हटना कि नोड्स. विकासकर्तालाई लेख्न रूपमा, यो फरक सबै अनुमति दिन्छ “इमानदार नोड्स” एक सहमति पुग्न. रैखिक अर्डर को समस्या समाधान प्रेत कुनै पनि गणना स्केल गर्न अनुमति दिन्छ, स्मार्ट अनुबंध सहित.
Sompolinski र Zohar रैखिक अर्डर खातिर भनेर पहिचान, प्रेत लेनदेन पुष्टि दर बलिदान, को पहिले भूत प्रोटोकल मा उच्च थियो जो. तर अनुसन्धानकर्ताहरूले भविष्यमा काम यो समस्या समाधान गर्न जाँदैछन्.
Cryptotrading - प्रवेश र निकास अंक
जब यो राम्रो छ ...
अतिरिक्त ग्रीक अदालत ...
अघिल्लो पोस्ट:क्यानाडा पहिलो Blockchain ETF नियामकहरु द्वारा अनुमोदित
अर्को पोस्ट:Litecoin छ